Dagaalka Ilhaan iyo Trump: Ilhaan Cumar oo ka shaqeyneysa hindise sharciyeed u daneynaya Soomaaliya - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Ilhan Omar/Twitter
Image caption Ilhaan Cumar ayaa wali sii wadda dagaalka ay kula jirto madaxweyne Trump
Ilhan Cumar ayaa lagu wadaa in maalinta Arbacada ah ay aqalka wakiillada ee Koongareeska hor geyso hindise sharciyeed ay ku doonayso inay ku afjarto waxa ay ku tilmaamtay "Islaam nacaybka" madaxweyne Trump.
"Waxaan ballanqaadayaa inaan gabagabeeyo Islaam nacayb Trump iyo mamnuucidda Muslimiinta", ayey barteeda Twitter-ka ku qortay Ilhan maalintii Talaadada ahayd.
"Ma'ahan in la dafiro xuquuqda aasaasiga ah ee dadka iyagoo loo sababeynayo diintooda, jinsiyaddooda ama dalka ay kasoo jeedaan."
Madaxweyne Trump ayaa horay boggiisa Tweetarka ku qoray 'hadal jeejees ah' oo uu ula jeedo Ilhaan Cumar.
Lahaanshaha sawirka Ilhan Omar/ Twitter
Image caption Ilhan Cumar ayaa sannadkii lasoo dhaafay ku biirtay aqalka Koongareeska
Inta uusan khudbaddiisa billaabin ka hor ayuu yiri 'Oh waan ilaaway illeen Ilhaan Cumar Israa'iil ma jecleyn, waan ka xumahay. Maya Israa'iil iyadu ma jecla, miyey jeceshahay? Fadlan waan ka raalli gelinayaa.
Maxaa sababay guulaha dumarka Soomaalida ay ka gaareen siyaasadda Mareykanka?
Haddii Ilhaan Cumar ay ku guuleysato ol'olahan cusub ee ay sheegtay inay billaabeyso, waxaa suurta gal ah inay dan u noqoto dad Soomaaliya kasoo jeeda oo Mareykanka laga hor istaagay, maadaama ay Soomaaliya ku jirto dalalka Muslimiinta ah ee muwaadiniintooda aan loo oggoleyn inay galaan Mareykanka.